Samsung gbanwere atụmatụ mmalite nke Galaxy S8 | Gam akporosis
Samsung gbanwere atụmatụ maka Galaxy S8
Ọ kabeghị ire ere, nke ọma, n'eziokwu, ọ kabeghị ma ọ bụ gosi ya, agbanyeghị Samsung nwere ntụkwasị obi dị ukwuu na ọkọlọtọ ya na-esote yana ịghachite iguzosi ike n'ihe ndị ahịa. Nke a mere na o kpebiri igbanwe ụzọ mbu ma gbue mmalite nke Galaxy S8, ka ị na-eche ere dịkarịa ala nde 60.
Mgbe nsogbu dị egwu nke Galaxy Note 7, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọnụọgụ akụ na ụba ya agaghị emetụta ya, Samsung ka nwere nnukwu ụzọ ọ ga-aga, ọkachasị mgbe ọ nwetaghachiri ntụkwasị obi ndị ahịa, yana nnukwu ohere ya na-esote. , nke ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya olileanya ya niile.
1 Galaxy S8: ebe olile anya Samsung bi
1.1 Samsung na-atụ anya ka ihe ịga nke ọma nke Galaxy S8 dị ukwuu karịa ọgbọ gara aga
1.2 Mgbanwe nke atụmatụ
1.3 Ọnọdụ dị mgbagwoju anya
Galaxy S8: ebe olile anya Samsung bi
Dị ka anyị na-ama gwara gị ụnyaahụ na Androidsis, na dị ka a akụkọ ihe bipụtara site Onye Nwee egoNa-ekwu maka otu ụlọ ọrụ na-amaghị aha ya, ụlọ ọrụ eletrọniki nke South Korea "rịọrọ ndị mmekọ ya ka ha nye (akụkụ na akụrụngwa) dabere na ebumnuche nke nde 60." Mana ma eleghị anya, ihe kachasị mkpa bụ na otu ebe a rụtụrụ aka na akwụkwọ akụkọ na Emeziwo usoro maka mmalite nke Galaxy S8.
Samsung na-atụ anya ka ihe ịga nke ọma nke Galaxy S8 dị ukwuu karịa ọgbọ gara aga
N'agbanyeghị afọ karịa Samsung nke Samsung nwere, ụlọ ọrụ nwere atụmanya dị elu maka ọkọlọtọ ya na-esote, Galaxy S8, nke ọ na-atụ anya ire ọ dịkarịa ala nde 60 nde.
Iji tinye ihe ka mma na gburugburu, ka anyị cheta na Galaxy S7 na-emeri, yana "nwanne" ya bụ Galaxy S7 Edge, rere naanị nde 50, ma e jiri ya tụnyere ndekọ ndekọ nke Galaxy S4 setịpụrụ na 2013 nke karịrị 70 nde. O doro anya na Samsung chọrọ ịlaghachi n'ọnọdụ a, ọbụnakwa merie ya, ọ ka ga-ahụ ma ọ ga-aga nke ọma.
Mgbanwe nke atụmatụ
The mbụ asịrị banyere ya kwuru kwupụta a n'oge n'oge tọhapụ; Samsung emeela atụmatụ ịmalite ụdị ọhụrụ nke Galaxy S8 ozugbo enwere ike, dị ka ihe iji dozie enweghị afọ ojuju nke ọgba aghara nke Galaxy Note 7 na karịa ihe niile, ịmalite iweghachite ndị ọrụ nwere ike ịkwụsị ntụkwasị obi na ika ahụ. . Otú ọ dị, ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ga-atụle nke ahụ mwepụta nke Samsung Galaxy S8 pụtara na etiti Eprel, ọ ga-eche na igba egbe ga-ewere ọnọdụ ihe dịka otu ọnwa gasịrị karịa na mbụ.
Anyị ghọtara nke ahụ Ngbanwe a n'okporo ụzọ maka mmalite nke Galaxy S8 nwere ike irube isi na otu ụkpụrụ ahụ nke ụlọ ọrụ ahụ tụlere ịkwalite mmalite ahụ, nke ahụ bụ ịsị, iji gosipụta mmetụta nke "ịmechara nke ọma", nke ịdị mma, na ha dị oke mkpa maka ịmalite ngwaahịa ọhụrụ yana ihe a niile, n'ikpeazụ, nwetaghachi obi ike na ọtụtụ ndị ahịa ga-efunahụ.
Mgbe ahụmahụ nke Galaxy Note 7, na a abụọ ndọrọ ego si ahịa ruo mgbe akpatre ya mmepụta a kpam kpam gbahapụrụ, ji ọsọ mwepụta nke ọhụrụ flagship nwere ike na-abụghị mmetụta dị ka chọrọ, ya bụ, nye mmetụta nke a "ọsọ" ịhapụ ihe merenụ, ma ghara ịmepụta na onye nwere ike ịzụta ya nchebe na ntụkwasị obi dị mkpa. Ogo bụ taa ihe dị mkpa karịa Samsung; Cheta na ihe karịrị otu izu gara aga, Kwon Oh-hyun, onye isi Samsung Samsung, gwara ndị ọrụ ụlọ ọrụ okwu na ya okwu Afọ Ọhụrụ ma mee pụrụ iche mesiri ike na mkpa nke ịnọgide na-enwe ngwaahịa mma.
Ọnọdụ dị mgbagwoju anya
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ejirila rụọ ọrụ ndekọ ndekọ maka nkeji iri abụọ na ise ikpeazụ nke 2016, atụmanya Samsung siri ike izute dịka nchegbu ahụ, sitere n'aka ndị ọrụ na ndị nyocha. Na akụkụ buru ibu, nke a bụ n'ihi atụmanya siri ike Apple iPhone megharịrị, nke afọ a na-agba afọ nke iri ya, dịka ọ dị ọganihu na-aga n'ihu nke ụdị ndị ọzọ dị ka Huawei na China.
Otú ọ dị, otu ihe yiri ka ọ bụ: Galaxy S8 na-abịa n'oge na-adịghị anya, ọ ga-abụkwa oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung gbanwere atụmatụ maka Galaxy S8
Mkpụrụ mkpụrụ na-ere nkewa satịlaịtị ya Terra Bella
Egwuregwu egwuregwu na-akpali akpali nke 2 sitere na ndị mmepe Spanish